ISEBOX: Vhidhiyo Zvemukati Kuburitsa uye Kuparadzira | Martech Zone
ISEBOX inobvumidza vamiririri uye marangi kuti mange, kushambadzira nekuparadzira mifananidzo, zvinyorwa, maodhiyo faira, embed code, uye nezvimwe zvese pa peji rimwe chete. Peji yekuenda inogona kuchengetedzwa nepassword kana kuvhurika kuruzhinji Akaiswa mavhidhiyo mafaera anogona kunge akakura se5GB pafaira uye midhiya inogona kutamba nemutengi kana HQ pane chero desktop kana nhare mbozha isingade kurodha pasi, mutambi, FTP yekupinda, nezvimwe.
Vatengi veISEBOX vanoshandisa imwechete-peji chikuva chekuparadzira mavhidhiyo mafirifomu, multimedia kuburitswa neruzhinji, chishandiso chishandiso, yekudhinda mishumo yekuvhara uye seyemukati yekugovana nhumbi yekushandisa kana raibhurari yezviri mukati.
ISEBOX Makiyi Akakosha eChinyorwa uye Kuburitsa Sanganisira:
Zvese zvirimo, Nzvimbo Imwe - Isa mifananidzo, vhidhiyo, odhiyo uye zvinyorwa zvemhando ipi neipi kuISEBOX uye ugozvigovana nechikwata chako, vatengi, vatapi venhau, uye midhiya. Zvese zvinogona kutariswa nekutorwa munzvimbo imwechete. Imwe URL inonunura zvese munzvimbo imwechete.
HD Broadcast Vhidhiyo Kugovera uye Kugovana - Govera mavhidhiyo mafaera kusvika HD mhando - akagadziriswa mapakeji kana b-roll zvemukati. Mafaira ako akazara evhidhiyo anozotakurika, pamwe nekugadzira otomatiki mafomati ekugadzirisa MP4 neFLV. Hapanazve shanduko uye faira nyaya dzekutamba.
Makuru Mafaira Kuisa - Uchishandisa ISEBOX's tsika-yakavakirwa Yakakura Faira Rodha, rodha uye ugovane imwechete mafaira kusvika ku5GB muhukuru pasina kukanganisa neFTP uye akaomarara marogi. Iwe haugone kuzviita neemail, WeTransfer kana YouSendIt. Uye iwe unogona kurodha seakawanda mafaera sezvaunoda.
Dhawunirodha uye Simbisa Kutevera - ISEBOX inoteedzera chaizvo kuti ndiani arikutora zvemukati - achipa zita ravo, email, mushandirwi, zita, uye nezvimwe - zvese mumushumo wakarongedzwa padashboard rako. ISEBOX inokuudzawo kuti ndeapi ma URL evhidhiyo akaiswa mukati, uye nemabatiro avari kuita.
Mishumo uye Analytics - Pima kushanda ne ISEBOX Reports uye Analytics. Ziva kuti mangani ekurodha pasi uye naani, anotarisa peji, anoreva traffic, inonyanya kufarirwa zvemukati, uye zvemagariro midhiya zvinokanganisa (masheya, Anofarira, maTweets, nezvimwewo). Yedu pachedu analytics injini inokupa ruzivo rwakawanda kupfuura Google - ndiwe muridzi wedhata, kwete ivo. Kana iwe uchida kubaya muGoogle Analytics ID yako mbiri kumusoro, iwe unogona kuzviita futi.
Kubatana Dashibhodhi inokutendera iwe nechikwata chako kushanda pamwe chete, nematanho akasiyana emvumo, pane zvemukati nemishumo. Kana iwe uri kushanda nevatengi, iwe unogona kuvapa yavo vega dashibhodhi futi, ichikubvumidza iwe kuti ushande pavari vese.
famba - Zvese zvakarongedzwa muHTML5 kuona kugarisana nezvose nhare mbozha - Android, iPhone, iPad, Blackberry, uye zvimwe. Ose mavhidhiyo, mifananidzo, odhiyo, uye zvinyorwa zvinoonekwa zvisinei nezvaunoisa, uye chishandiso kana browser riri kushandiswa.
Yakazara Brand Customizable - ISEBOX yemapeji emukati anogona kuiswa mucherechedzo kuchako chako, kana chiratidzo chevatengi vako kana uri agency. Zvese zvinhu kubva kune akawanda font kusarudzwa, logo, RGB / Hex mavara, kumashure mufananidzo uye nezvimwe.
E-Mail Kugovera - Isa zvinyorwa zvako zvekugovera kuISEBOX, wobva waronga kana kutumira ISEBOX Mailout. Iyi email ine hushamwari vhezheni yeiyo yakafanana ISEBOX yemukati peji isingagumi mune spam maforodha, kutemerwa sejunk mail, kana kuvhara mabhokisi emabhokisi ane zvinorema zvakabatanidzwa. Ichazototamba vhidhiyo chaimo muemail kana ichitsigirwa.
Password Inodzivirirwa - Haina kugadzirira kuti nyika ione zvirimo? Nekamwe-tinya password chengetedza chero ISEBOX peji uye nezviri mukati. Yakakwana kune vezvenhau / mutapi venhau zvakasarudzika, zviri nyore zvemukati kutaurirana, kana vatengi kubvumidzwa maitiro.
Mitauro Yakawanda - Shambadzira ako ISEBOX mapeji emukati mune imwe yemitauro yakawanda inosanganisira: Chirungu, ChiFrench, ChiSpanish, ChiGerman, Chiitaliya, ChiChinese, ChiPutukezi, neCzech nemimwe mitauro iri kuwedzerwa mumwedzi inotevera.
Zvemagariro Media Zvinowirirana - kumberi kwakagadzirirwa kushanda uye kutaridzika kunge kwakatsetseka semagariro mapuratifomu atinoshandisa mazuva ese. ISEBOX zvakare inokupa iwe sarudzo yekugonesa imwechete-tinya yemagariro login kune vashandisi kurodha zvirimo Nyore Yemagariro Kugovana zvinongedzo zvinosaswa mukati meESEBOX, futi.
Tags: echiitiko kudhindaiseboxYeMahara neThebhu KushambadziraSocial Media Marketing